Fitaovana fandrefesana 40+ hanatsarana ny varotrao amin'ny Internet
40 fitaovana, 40 slide, 40 minitra
Alahady, Aogositra 21, 2011 Alakamisy Oktobra Oktobra 27, 2011 Douglas Karr
Tamin'ny fiandohan'ity volana ity dia nanana fotoana nahafinaritra aho nanao fampisehoana tao Blog Indiana 2011. Hetsika mahafinaritra ity satria ity no lehibe indrindra eto amin'ny faritra ary manana fahafinaretana mizaha toetra vaovao aho. Ity fampisehoana ity dia nifantoka fotsiny tamin'ny zavatra tsy hitan'ny mpivarotra amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fonosany Analytics fotsiny hanatsarana ny ezaka ara-barotra amin'ny Internet.
Ny fahombiazan'ny motera fikarohana, ny fahombiazan'ny haino aman-jery sosialy, ny famantarana ny fitarika ary ny fahatakarana ny fihetsiky ny mpampiasa eo amin'ny pejy na amin'ny alàlan'ny tranokala dia tsy hita ao amin'ny Analytics. Ireo sehatra toa ny Google Analytics, raha ny hevitro, dia tokony ho vitsy an'isa amin'ny entan'ny mpivarotra raha ny amin'ny famakafakana sy fanatanterahana ny paikadim-barotra iraisana. Ity ny famelabelaran-kevitra miaraka amina lohatenin'ireo fitaovana samihafa sy fomba fijery samihafa omen'izy ireo.
Raha tsy manambola loatra… izany no mahatonga ahy mpankafy be Webtrends. Rehefa nihaona tamin'izy ireo aho taona vitsivitsy lasa izay, fantatr'izy ireo ny zava-mitranga ao amin'ny indostria. Ankoatry ny fanatsarana goavana ny ankehitriny Analytics sehatra, nanitatra tamin'ny fomba mahery vaika izy ireo tamin'ny fampisehoana an-tserasera. Webtrends Social, Webtrends Apps, Webtrends Mobile, Webtrends Ads… Segmentation, Optimization, Real-time analytics… ny ekipa dia manome fitaovana marobe ary mampiditra azy ireo tsara mba hanamora ny fampivelaran'ny mpivarotra paikady mahomby.
Tags: tsoratadidy sosialy
Hoy ny fanadihadiana nataon'ny haino aman-jery sosialy: miakatra ny tompony
Aug 22, 2011 amin'ny 3: 49 AM
Fitambaran-tsavily lehibe izy io ary famelabelarana lehibe tao amin'ny Blog Indiana. Toa akaiky loatra ny fomba fisainantsika momba ny fanadihadiana sy ny fandrefesana.
Miala tsiny fa tsy nety ilay zavatra bundle bit.ly. Mety tsy haiko mihitsy izany soso-kevitra izany.